Umsebenzi nodumo ngaphambi komndeni kuKhaya Dladla | Scrolla Izindaba
Umsebenzi nodumo ngaphambi komndeni kuKhaya Dladla
Uma kukhulunywa ngempilo yakhe yasekhaya, uKhaya Dladla owake waba ngumlingisi ku-Uzalo ophinde abe ngumethuli wohlelo emsakazweni ukulungele ukuqala umndeni.
Kepha akudingayo njengamanje yisikhathi sokufaka umsebenzi wakhe egiyeni eliphezulu ngaphambi kokuba azinikele emndenini.
“Ubudlelwano bami nengoduso yami buhle futhi buzinzile. Singaqala umndeni nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa ngeke ngikhululeke ukuqala umndeni ngaphandle kokufinyelela ezinhlosweni zami zomsebenzi,” uyasho.
UKhaya wazakhela udumo ngesikhathi edlala owesilisa oyisitabane oyisoka, u-GC, ku-Uzalo.
“Ngifuna ukuzibamba ukuze ngiqale umndeni ngoba ngifuna ukubakhona ezinganeni zami ngaphandle kokukhathazeka ngokujaha imali,” uyasho.
Uthe akasoze athi ungumlingisi ohamba phambili ngoba lokho kuzomshiya engenandawo yokukhula nokufunda.
UKhaya usanda kubuya ngendlela emangalisayo nengalindelekile kumabonakude ngendima entsha kwi-Hostela ku-season 2 njengo-Nxebalendoda.
“Ngesikhathi ngithola ucingo lokuthi ngidlale le ndawo ngangifuna ukulugcina luyimfihlo ngoba ngangifuna ukumangaza labo abacabanga ukuthi ngikwazi ukudlala indima efanayo nekaGC kuphela. Bengifuna ukufakazela ukuthi wonke umuntu unephutha. Ngifuna ukuthumela umyalezo wokuthi ngingumlingisi,” utshele abakwa-Scrolla.Africa.
“Njengoba indima kaGC ingivulele iminyango eminingi, angifuni ukudlala izindima zobungqingili ngaso sonke isikhathi.”
Uthe njengamanje wenza inhlolokhono yeminye imibukiso emibili enezingxenye ezahlukahlukene.
UKhaya ubuyele futhi emsakazweni kanti okwamanje uziphushela umculo wakhe eceleni.
“Ngizama ukwakha uphawu olungasoze lwaphela futhi ngomculo ngisafunda futhi ngizama ukuthola umsindo wami.”